Khubaro ku xeeldheer siyaasadda oo ka hadlay kulanka Somaliland iyo Somalia. | Salaan Media
ANKARA (SM)-Dublomaasi sare oo Turki ah ayaa faahfaahin ka bixiyay wada hadallada dawladdiisa Turkigu ku martigelinayso Somaliland iyo Soomaaliya, kuwaasi oo uu sheegay in ay yihiin kulan saddex geesood ah oo uu isna qayb ka yahay wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Axmed Davatoglu.
Dublomaasigan oo u warramay wargeyska Today’s Zaman waxa uu ka hadlay in madaxweynaha Somaliland Axmed Siilaanyo iyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ay iyana kulan ka fool ka fool ah yeelan doonaan , iyada oo sida oo kalena ay wada hadallo kula yeelan doonaan Ankara saraakiisha Turkiga, ka dib kulankooda Istanbuul.
Dublomaasigan oo aan la magac dhabin isaga oo ka hadlaya arrimahan, waxa uu yidhi “Turkigu waxa uu u qabanayaa kulan saddexgeesood ah labada hoggaamiye si uu u fududeeyo wada hadallada u dhexeeya, kulankan waa kii ugu horreeyay ee noociisa ah ee u dhexeeya labada hoggaamiye, waxaanu Turkigu aad ugu faraxsan yahay inuu kulankani ka qabsoomo Istanbuul.
Turkigu waxa uu diyaar u yahay inuu qaybtiisa ka qaato tas-hiilaadka wada hadallada u dhexeeya labada hoggaamiye, waxaanu ku leenahay fududeyn, halkii dhexdhexaadinta kulankani “ .
Sida uu sheegay diblomaasigu ra’iisal wasaaraha Turkiga Rajab Dayib Erdogan ayaa isna ku jira kulanka labada hogaamiye haddii waqtigu u oggolaado.
Wargeysku dhinaca kale waxa uu soo qaatay inuu madaxweyne Siilaanyo booqday Turkiga badhtamihii Maarij si ay wada hadallo u yeeshaan saraakiisha Turkiga oo uu ku jiray wasiirka kharaajigu, kaasi oo ballanqaaday inay kordhinayaan taageeradooda Somaliland.
Waxa kale oo uu xusay intii booqashadaasi lagu jiray in ay ahayd inuu Madaxweyne Silaanyo la kulmo Ra’iisulwasaare Erdogen, balse kulankaasi ay baajisay xaalada caafimaad ee Erdogan.
Isaga oo ka sii hadlaya kulankaasi waxa uu sheegay in iyana laga wada hadlay mashaariicda ay ka fuliyaan hay’adda iskaashiga caalamiga ah ee Turkiga (TIKA) iyo ururada kale ee aan dawliga ahayn ee Turkigu Somaliland.
“Wasiirka arrimaha dibadda Turkiga waxa uu ballanqaaday inay sii kordhinayaan dedaalkooda taageero ee Somaalida oo dhan oo ay ku jirto Somaliland. Waxa kale oo uu hoosta ka xariiqay inay Somaliland waxyaabaha muhiimka ah ee ay u leedahay Turkiga ay ka mid tahay iyada oo la lahayd xidhiidh taariikheed oo soo jirey ilaa cahdigii boqortooyadii Cusmaaniyiinta,” ayuu yidhi dublomaasiga.